Cunnooyinka lagu diyaariyo cunnada kalluunka lagu sameeyo | Kalluunka
Jarmal Portillo | | Aquarium Tropical
Waxaad rabtaa inaad sameyso cuntada kalluunka lagu sameeyo? Maqaal hore waxaan ku siinay a cuntada sida loo diyaariyo ku dhaji kalluunka kulaylaha ama noocyada ugu caansan. Maanta waxaan ku siin doonnaa cunto karinta aad ugu diyaariso cuntada kalluunka jajaban.
Premium Tropical Supervit ...
TetraDelica - Cuntada
Sera Vipagran aasaasiga ah...
1 Cuntada guriga lagu sameeyo ee kalluunka kulaylaha ah
1.1 Waxyaabaha ay ka kooban tahay in laga sameeyo cuntada kalluunka guryaha lagu sameeyo
1.2 Sida loo sameeyo cunnada kalluunka jilicsan ee guriga lagu sameeyo
2 Cunto kalluun biyo qabow oo guriga lagu sameeyo
2.1 Kalluunka Tetra Goldfish ee Kalluunka Biyaha Qabow
2.2 Granules biyo qabow kalluunka cuntada
2.3 Rabitaanka cuntada
3 Cuntada dabiiciga ah ee guppies
4 Sideen ugu samayn karnaa boorash kalluunka badda?
Cuntada guriga lagu sameeyo ee kalluunka kulaylaha ah
Waxa ugu horreeya ee aan sameyn doonno waa inaan baranno sida loogu diyaariyo cuntada macmalka ah ee kalluunka kulaylaha:
Waxyaabaha ay ka kooban tahay in laga sameeyo cuntada kalluunka guryaha lagu sameeyo
Kuwani waa maaddooyinka lagama maarmaanka u ah si aad ugu diyaarsato cuntada kalluunka lagu sameeyo ee guriga lagu sameeyo.
Nus kiilo hilib kalluun ah oo aan miisaan lahayn
Nus kiilo oo ah beerka lo'da
Kalab kiilo oo wadnaha hilibka ah (oo aan lahayn dufan iyo neerfayaal)
Ukunta la kariyey,
Madaxa toon diiray
Casiirka hal liin,
Afar qaado oo miro dhaldhalaal ah
Laba qaado oo ah diyaarinta polyvitamin
Qaado oo soy lecithin ah
¼ qaado sodium benzoate ah
Qaado oo glycerin ah (oo loogu talagalay qoyaan-qoyan)
Sida loo sameeyo cunnada kalluunka jilicsan ee guriga lagu sameeyo
Waxaan u shiideynaa maaddooyinka illaa aan ka helayno boorash biyo ku daraya illaa ay ka gaarayaan isku-dheellitir-dareeraha.
Waxaan diyaarinnaa saxaarad sagxad ku fidsan oo waxaan ku kala qaadnay lakab khafiif ah iyo xitaa lakab boorash ah.
Waxaan ku dhejineynaa foornada heerkulka ugu yar, xusuusnow in fiitamiino badan lagu burburin karo heerkulka sare. Waxaan karnaa ilaa baastada ay ka qalasho.
Waxaan ka saareynaa cuntada naga caawineysa spatula. Haddii ay kugu adkaato, waxaad adeegsataa xeeladda ah inaad uga tagto banaanka habeenkii si qoyaanka deegaanka u jilciyaa.
Ku kaydi jajabka weel si adag loo daboolay.
Xaddiga maaddooyinka ayaa kala duwanaan kara iyadoo ku xiran baahida nafaqada ee kalluunka. Haddii aan leenahay kalluun leh dabeecado badan oo hilib cun ah waxaan yareyn karnaa qadarka khudaarta, haddii ay aad u badan yihiin kuwa khudradda leh waxaan kordhin doonnaa qadarka khudaarta.
Haddii loo baahdo kiciya rabitaankaaga cuntada Waxaan ku dari karnaa qaado qaado xoogaa adag oo fiitamiin ah oo laga heli karo farmashiyaha ama dhakhtarka xoolaha. Dhismuhu waa inuu kugula taliyaa khabiir ku takhasusay arimahan.
Cunto kalluun biyo qabow oo guriga lagu sameeyo
Dhammaan kalluunka biyaha qabow waa sahlan yihiin in la haysto. Iyagu waa kalluun leh cunto xumo, laakiin taasi macnaheedu maahan inaad iyaga wax siin karto. Waxay u baahan yihiin cunto ku habboon nidaamka dheef-shiidkaaga iyo, tan, waxaad ku dooran kartaa qaabab kala duwan (jajab, dhagaxyo, ubax sabayn ah ...).
Kalluunka Tetra Goldfish ee Kalluunka Biyaha Qabow
Tani waa cunno dhammaystiran oo jilicsan oo loogu talagalay dhammaan kalluunka dahabiga ah iyo kalluunka kale ee biyaha qabow ku jira.
Kalluunka, sida wax kasta oo nool, wuxuu u baahan yahay cunto dheellitiran oo leh tayo sare oo fiitamiino ah. Qaacidadan Tetra ee lahaanshaha leh waxay ka kooban tahay isku darka miisaaman ee fiitamiinnada lagama maarmaanka ah, maaddooyinka leh tabaruc weyn oo xagga tamarta ah iyo kuwa difaaca jirka oo hagaajiya howlaha jirka isla markaana xoojiya iska caabbinta cudurrada kalluunkeenna.
Intaa waxaa dheer, isku dar ah ayaa loo diyaariyey si ay u helaan cunto kala duwan oo dheellitiran, oo lagu daro dhammaantood nafaqooyinka lagama maarmaanka ah iyo waxyaabaha ka kooban, iyo sidoo kale cunsurro.
Cunnadan waxaad ku hubineysaa nolol dheer oo caafimaad leh kalluunkaaga, marka lagu daro kor u qaadista midabbada quruxda badan.
Granules biyo qabow kalluunka cuntada
Waad ku mahadsan tahay cuntadan granulated, midabaynta iyo difaaca dabiiciga ah kalluunkayaga qabow ayaa aad loo xoojiyay.
Waxay ka kooban tahay kalluunka kalluunka, galleyda, burka qamadiga, spirulina (10%), jeermiska qamadiga, khamiirka qamriga, saliidda kalluunka, gammarus, qamadiga gluten, krillmeal, mussel-liifka cagaaran (perna canaliculus) budada, nettle, geedaha, alfalfa, badda , paprika, dhir, isbinaajka, karootada, toonta.
Haddii mid ka mid ah kalluunkeennu uu bilaabo inuu wax yar cuno ama uu bilaabo inuu yeesho dhadhan aan la taaban karin, waxaa jira kiciyeyaal loogu talagalay dhadhanka cuntada iyo rabitaanka cuntada. Waxaa loo isticmaalaa kalluunka biyaha qabow ee cusbada iyo cusbada labadaba.
Kicin-kiciyahan waxaa ku jira maaddooyin firfircoon oo dabiici ah oo laga helo toonta, allicin, taas oo la muujiyey inay leedahay waxtar badan oo caafimaad. Allicin ayaa xoog leh sifooyinka antioxidant (oo la mid ah fitamiin C) oo gacan ka geysanaya ilaalinta caafimaadka iyadoo laga takhalusi doono xag-jirrada xagjirka ah ee halista ah.
Aad ayey waxtar u leedahay haddii aad rabto inaad daawo afka kaga siiso kalluunka lagu qasay cuntada.
Cuntada dabiiciga ah ee guppies
Waxaa ka mid ah cuntooyinka dabiiciga ah ee ugu caansan guppies waa miisaanka. Waxa jira noocyo badan oo miisaan ah, kuwa ka kooban inta badan dhirta iyo kuwa leh borotiin badan, iyo kuwa si deg deg ah ugu degga kuwa sababa dusha sare si ay ula qabsadaan caadooyinka noocyada kalluunka ee kala duwan.
Haddii aan ku quudinno kalluunkayaga qaddarro miisaan ah, waxay bilaabayaan inay ku xareeyaan xagga hoose oo ay sababi karaan biyaha ayaa lumiya tayada wax kala daadanaya.
Waxaan ku quudin karnaa guppiayada cunno aan ka heli karno jikadayada. Cuntadan waxaa ku jira digiraha, jiiska iyo waxyaabaha kale ee caanaha laga sameeyo, ukunta adag ee la kariyey, hilibka caatada ah, miraha, badarka, iwm. Sida iska cad, waa lagama maarmaan in la diyaariyo dhammaan cuntooyinkan si ay u wada baabba'aan guutooyinkeena. Waa la nadiifin karaa oo lagu qasi karaa gelatin si loo sameeyo xabadaha, ama la jajabiyey oo toos loogu quudiyo kalluunka. Sidoo kale waa la sii marin karaa iyada oo la miirayo illaa nooc nooc oo ganaax ah laga helo.
Xaqiiqdu waxay tahay inay jiraan siyaabo badan oo kalluunka loogu quudin karo wax soo saarka cusub, laakiin waa in lagu xisaabtamo inay biyaha ka dhigayaan kuwo aad u wasakh badan oo ay lagama maarmaan noqon doonto dhaqso uga saar hadhaagii ku hadhay asalka.
Ugu dambeyntiina, waxaan ku quudin karnaa buunbuuninteenna cunnooyinka nool sida cayayaanka, cawsha kalluunka, hilibka jilicsan, iwm. Qaar ka mid ah cuntooyinkaas waxaa la siin karaa kalluunka siduu yahay, laakiin kuwa kale waa in la jaro ama la jajabiyo.
Si aan ugu quudino cunnooyinka guppi-ga, waa inaan taxaddar u yeelano sidoo kale ha soo bandhigin cudurada cudurada keena, sida dirxiga cayayaanka, oo weerari kara kalluunkeenna.
Sideen ugu samayn karnaa boorash kalluunka badda?
Haddii aan dooneyno inaan sameysano boorashkeena si aan ugu quudino kalluunka badda dhexdeeda quraaradda, waa inaan raacnaa tallaabooyinka qaar. Waxa ugu horreeya waa in la qeexo waxa aan u aragno inuu yahay mush. Boorashku waa badeecad la diyaariyey oo lagu soo saaro ee cabitaanka kala duwanaanta mollusk, sida kalluunka, kalluunka casaanka, haley, iwm. la jajabiyey ilaa laga helayo boorashka.
Iyada oo ku xidhan cuntada kalluunkeenu haysto, waa inaan ku darno maaddooyin sida ku cad cunista hilibka digaaga, dhirta dhirta ama geedaha leh.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay boorashka kalluunka omnivorous:
Mar alla markii aan helno dhammaan maaddooyinka aan ku diyaarinayno boorashka, waxaan ugu shubi doonnaa isku darka waxyar si tartiib tartiib ah, illaa ay dhammaantood ka mid noqdaan. Waxaan isku darsaneynaa ilaa ay qaadaneyso boorashka shaashadda oo ay noqon karto dhawr qaybo yar oo ka mid ah maaddooyinka.
Haddii aan rabno inaan ceshanno boorashkeenna in muddo ah, waxaan ku keydin karnaa bac balaastik ah oo hufan ayaan ku xirxiraynaa, oo ku ridi karnaa qaboojiyaha.
Hadda waad quudin kartaa kalluunkaaga si sax ah iyadoo loo eegayo baahidooda nafaqo, iyadoo la siinayo cunto caafimaad leh oo isu dheellitiran oo u tarjumeysa caafimaad iyo ladnaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Aquarium-ka biyaha qabow » Aquarium Tropical » Cunnada kalluunka lagu sameeyo
Waad salaaman tihiin, waan ku cusbahay mowduucan, runti aniga faa iido badan ayey ii leedahay, waad ku mahadsantihiin wixii aan baray waxaanan rabaa inaad sii waddaan wax ka qorida mowduucan aadka u muhiimka ah
Ku jawaab Darwin Vera Zambrano